UNIVERSAL NUTRITION REAL GAINS – Kulmiso
HomeIsboortiga & AgabyadiisaUNIVERSAL NUTRITION REAL GAINS
Waxaad heli doontaa oo keliya waxyaabaha aad ugu baahan tahay, sida kalooriyada, borotiinka, dufanka joogtada ah ee leh fiber iyo dhadhan tayo leh. Dhanka kale, waa sonkor laan, taas oo aan faa iido lahayn.
Qaso hal qaado inta u dhaxaysa cuntada iyo wakhtiga jiifka. Waxaa kale oo loo isticmaali karaa in lagu beddelo 1 cunto maalintii. Isku qas 3.5 qaaddo oo ah 12 ilaa 16 oz. Ama qaso 1/2 qaado laba ama saddex jeer maalintii.
Xajmiga: 6.85 LB oo ah 3.10kg
Dhadhanka: Cookies and Cream
Shirkada: Universal Nutrition
Isticmaal ka hor: 01 September, 2021
Be the first to review “UNIVERSAL NUTRITION REAL GAINS” Cancel reply